Umthethwandaba kamantshi ngoLwesine unqume ukuthi umeli weHarare West edale lephalamende, olilunga leMDC Alliance uNkosazana Joana Mamombe, kumele avalelwe ejele okwamaviki amabili ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukuthi ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na andubana ukuthethwa kwecala lakhe kuqalise.
UMamombe lamanye amalunga eMDC Alliance abalisa uNetsai Marova loCecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa.
Kunsukwana ezedluleyo amagqwetha kaNkosazana Mamombe acele umthethwandaba ukuthi udlulisele phambili ukuthonisiswa kwakhe ngoba esithi ingqondo zakhe azikho esimeni sokuthi udaba lwakhe lungaqala ukuhluzwa.
Kusinqumo sakhe umantshi uBianca Makwande uthe uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela laba evalelwe esitokisini ukuze kubonakale ukuthi ngempela uphazamisekile engqondweni na.
Igqwetha lakhe uMnu Aleck Muchadehama usole isinqumo lesi esithi uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela azikhethele bona hatshi abakhethelwa nguhulumende.
Ngakho, uthe uzasiphikisa eHigh Court.
Kolunye njalo udaba, umthethwandaba uthole abalwela amalungelo abagoqela igqwetha uMnu Doug Coltart leziphathamandla zenhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnu Obert Masarawule labanye bemsulwa kucala lokungaziphathi kuhle emphakathini ekade beletheswa ele-criminal nuisance.